Ny holatra dia vokatra tsy azo ihodivirana amin'ny dingan'ny fanamboarana ny ratra ataon'ny olombelona. Ny fery masiaka amin'ny ankapobeny dia tsy misy soritr'aretina eo an-toerana, fa ny fery be loatra kosa dia mety hiteraka mangidihidy eo an-toerana sy soritr'aretina hafa, ary mety hiteraka fetra miasa na koa homamiadana mihitsy.
Ny vokatra fitafiana silika ara-pahasalamana dia napetraka amin'ny vatan'olombelona nandritra ny 50 taona mahery. Izy ireo dia manana ny toetran'ny tsy misy poizina, tsy mahasosotra, tsy antigenika, tsy karsinogenika ary teratogenika, ary mifanentana tsara amin'ny bio. Hatramin'ny nahitan'i K Perkins sy ny olon-kafa ny gel silikaly satroka dia misy ny vokatry ny fanalefahana ny holatra tamin'ny 1983, fanadihadiana maro be no nanaporofo fa ny vokatra silika dia tena afaka misoroka ny fitomboan'ny takaitra.
Ny vokatra vita amin'ny silika dia mizara ho menaka manitra gel silikola sy patchy amin'ny silika. Anisan'izany, ny patch gel silônika dia mangarahara, miraikitra, mafy, ary azo ampiasaina miverimberina. Ny fantsom-panafody gel silikôlôjia dia manana permeabilitin'ny rivotra madio, ary ny tahan'ny famindrana etona rano dia manakaiky ny antsasaky ny hoditra mahazatra, izay afaka misoroka ny fery amin'ny fatiantoka. Ataovy mando foana ny velaran'ny ratra, izay manampy amin'ny famerenana indray ireo sela epithelia. Ny membrane silikonika manala ny fery dia misy fiantraikany amin'ny volatilization amin'ny ratra. Ny hydration dia mamela ny hoditra hitazona ny atin'ny rano avo kokoa, ary ny fanodinkodinan'ny rano mahomby dia manampy ny hoditra hihazona ny elastika. Ny fitazonana ny hoditra ho mando hisorohana ny hoditra amin'ny fahamainana sy ny triatra, amin'izay hampihena ny soritr'aretin'ny fanaintainan'ny hoditra sy ny mangidihidy.
tsy misy poizina, tsy mahasosotra, tsy antigenika, tsy karsinogenika, tsy teratogenika, ary mifanentana tsara amin'ny bio.